Kana iwe uchida kugadzira gwaro nyowani ine yakamira-kunze zvinyorwa, ungangoda kufunga nezvekuisa nyowani font. Izvi zvinogona kuwanikwa online mahara, sechikamu chefonti yakatarwa, kana yekutenga. Kana iwe uchida kuti vamwe vaone aya mafonti, iwe uchafanirwa kuashandisa mune akadzika mafaira, senge PDFs kana mifananidzo. Zvikasadaro, iwe unozofanirwa kupa iyo font pachezvayo.
Unogona kuisa mafonti pa Windows 10 munzira dzakawanda. Unogona kudhawunirodha nekuisa mafonti nemaoko kubva pamhepo zvinyorwa, unogona kuisa mafonti zvakananga uchishandisa iyo Microsoft Store, kana iwe unogona kushandisa echitatu-bato font mamaneja ekumisikidza mafonti kwauri. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekuisa mafonti pa Windows 10, izvi ndizvo zvauchazofanira kuita.
Kwatinowana Kutsva Windows 10 fonts
Kune akati wandei masosi epamhepo anowanikwa emahara kutora fonti. Iwe unogona, semuenzaniso, kurodha emahara mafonti kubva ku Google Fonts muunganidzwa, uko anodarika chiuru mafonti aripo.
Mamwe masosi epamhepo emahara mafonti anosanganisira Simba Gorosi uye Maforamu eUrban, asi ichi chiri kure nekunyanyisa rondedzero. Iwe unogona kunyange gadzira yako font uchishandisa iyo yemahara FontStruct sevhisi. Kunyangwe iwe uchirodha pasi font iripo kana kugadzira yako wega, iyo font faira pachayo inowanzo kuve iri TTF or OTF mafaira mafaira.
Kana iwe uri Photoshop mushandisi, iwe unogona kushandisa yako Adobe Creative Cloud kunyorera uye kurodha pasi mafonti kuburikidza nebasa iro. Iwe unogona zvakare kuisa mafonti pane Windows 10 uchishandisa Microsoft Store.
Isa Mafonti mu Windows 10 kushandisa Windows Font Viewer
Kana iwe wakatorodha yakakodzera TTF kana OTF font faira kubva kune yepamhepo sosi, unogona kuiisa nenzira dzinoverengeka. Nzira yekutanga ndeyekutarisa iyo font faira pachayo. Hwindo rinokutendera kuti utarise font uye riise uchishandisa iyo Windows Font Viewer.
Izvi zvinoratidza font iri kushandiswa nemutsara, gava rakakurumidza shava rinosvetuka pamusoro pembwa ine husimbe, iyo ine mavara ese ealfabheti. Iwo manhamba 0-9 uye mamwe ma <em> punctuation (senge semicolon) anoratidzwawo, achikubvumidza iwe kuona fonti dhizaini zvizere.
The Windows Font Viewer inovhura zvese zviri zviviri TTF uye OTF font mafaira Kuisa uchishandisa nzira iyi, tinya iyo gadza bhatani pakona yekumusoro-kuruboshwe kweiyo Windows Font Viewer hwindo.
Mushure mechinguva chidiki, font yako nyowani ichave iripo kushandisa mune imwe software paPC yako.
Isa Mafonti mu Windows 10 Uchishandisa iyo Fonti Yemafonti
Kana iwe uri kuisa akati wandei mafonti panguva imwe chete, zvakadaro, wozoisa mafonti uchishandisa Windows Font Viewer ingave inononoka, inotora nguva kuita. Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kuisa mafonti nemaoko nekuateedzera iwo mu Windows system dhairekitori remafonti (C:Windowsfontszvakananga.
Kuti uite izvi, vhura Windows Faira Explorer uye musoro kune C:Windowsfonts forodha. Mune imwe windows hwindo, dhonza mafaera ku fonts forodha. Neimwe nzira, teedzera mafaera, ipapo kurudyi-tinya> Namatira mu fonts dhairekitori pachayo.
Kana mafaera akateedzerwa kana kuendeswa munzvimbo, mafonti anowanikwa mune mamwe maapps uye akaiswa Windows software. Ungangoda kutangazve chero akavhurwa maapplication kuti ukwanise kuona mafonti, zvakadaro.
Isa Mafonti mu Windows 10 kushandisa Windows Settings
Kana iwe uchinetseka kuisa mafonti pa Windows 10 yawakaburitsa pamhepo uchishandisa nzira iri pamusoro, unogona kudhonza-uye-udonhedze iwo mu fonts menyu mukati Windows Settings panzvimbo.
Kuti uwane iyi menyu, tinya kurudyi iyo Windows Kutanga menyu uye pinda iyo Settings kuita.
In Windows Settings, press Kuita kwako> Fonti. Pamusoro pemenu pane sarudzo yekukweva-uye-kudonhedza mafaira emafonti. Kana iwe wakatorodha OTF kana TTF mafonti mafonti, unogona kuwana nekusarudza izvi mune zvakasiyana Windows Faira Explorer hwindo, wozodhonza-uye-udonhedze pane ako akavhura Windows Zvirongwa zvewindo.
Kana yangodonhedzwa munzvimbo, mafonti anenge agadzirira kushandisa ipapo ipapo.
Kutsvaga nekuisa Mafonti kubva kuMicrosoft Store
Kana iwe uchinetseka kutsvaga mafonti matsva aunoda, unogona kuwana iwo muMicrosoft Store, Windows 10Iyo yakavakirwa-mukati app chitoro. Panzvimbo pekutsvaga izvi nemaoko, unogona kuwana runyorwa rwemafaira aripo kurodha pasi zvakananga kubva kune yako Windows Settings zviripo.
Unogona kuvhura Windows Zvirongwa nekudzvanya kurudyi Mutangi menyu uye nekudzvanya Settings.
In Windows Settings, sarudza Kuita kwako> Fonti. Mu fonts menyu, tinya iyo Wana mamwe mafonti muMicrosoft Store kuita.
Izvi zvichatangisa Microsoft Store muhwindo idzva. Chinyorwa chemahara uye chakabhadharwa-chemafonti chichave chiripo kuti utarise. Dzvanya imwe yemafonti aripo mu fonts nyora pano kuti utarise.
Muchikamu chekutarisa chefonti muMicrosoft Store, tinya iyo tora bhatani. Izvi zvinotora pasi nekuisa font paPC yako. Iwe unofanirwa kupa mvumo yekutenga kana iwe uri kutenga yakabhadharwa-yefonti padanho rinotevera.
Mushure mekunge font yaiswa, iwe unozogona kuishandisa mune yako imwe software nekukasira.
Uchishandisa Vatatu-veTatu maFonti Mamaneja
Kana iwe uchinetseka kuisa mafonti matsva mu Windows 10, iwe unogona kusarudza kushandisa chechitatu-bato font font turu. Zvishandiso izvi zvese-mu-imwe mhinduro yemafonti, ichikutendera kuti utore, uchengetedze, uye uvandudze mafonti matsva zvakananga.
Mumwe wefonti maneja waungashandisa is FontBase, muchinjika-chikuva font font manejimendi yekushandisa Windows, Mac, uye Linux. FontBase yakasununguka kushandisa, uye inokutendera iwe kukurumidza kuisa mafonti kubva kuGoogle Fonts muunganidzwa pasina kurodha pasi nekumisikidza nemawoko.
Dhawunirodha uye gadza FontBase kutanga. Kamwe kana yaiswa, unogona kutarisa ako akaiswa mafonti muhwindo reFontBase. Kana iwe uchida kuisa fonti nyowani kubva kuGoogle Fonts muunganidzwa, tinya iyo Google chisarudzo pasi pe vanopa chikamu.
FontBase inoshandisa iyo kushandiswa system yekuchinja mafonti uye kudzima. Kana iyo app ikavhurwa, mafonti awakamisikidza ave kuwanikwa kuti ushandise mune imwe software. Kana yavharwa, mafonti akaremara uye anobva asisipo. Izvi zvakagadzirirwa kudzikisira yako system zviwanikwa mashandisiro. Kuti uite font, sarudza bhokisi rekutarisa padhuze nefonti mu Google rondedzero. Kana bhokisi rekutarisa rakasvibirira, font iri kushanda.
Kana iwe uchida, iwe unogona kutora font kubva kuFontBase uye kuiisa manyore kuti igare ichiwanika nguva dzese. Kuti uite izvi, tinya-kurudyi font yawakamisa, wobva wadzvanya iyo Enda kune font sarudzo. Izvi zvichavhura iko nzvimbo yefonti mu Windows Faira Explorer.
Tinya kaviri font faira kuti uvhure mukati Windows Font Viewer. Kamwe painovhura, tinya iyo gadza bhatani.
Kana iwe ukafunga kuisa FontBase font zvachose, ichave iripo kushandisa ipapo, zvisinei kuti FontBase yakavhurika kana kwete.
Kugadzira Zvigadzirwa Zvitsva nemaFonti Matsva pa Windows 10
Paunenge iwe waziva kuisa mafonti pa Windows 10, unogona kurega divi rako rekusika richienda musango. Zvinyorwa zvitsva, mifananidzo, nyanzvi infographics uye zvimwe zvese zvinogona kubatsirwa nefonti nyowani kana maviri, kunyanya kana iwe uchinetseka nekuona imwechete yekare Times New Roman kana Arial font muhukuru 12 inoonekwa mumagwaro ako.
Kana mafonti ako achinge aiswa, anotevera matanho ndeako. Iwe unogona kugadzira uye gadzira akawanda-peji rePDF mu Photoshop, ichikuregedza iwe kuti ubatanidze yako nyowani font dhizaini kuve yakamira static gwaro. Unogona kana wedzera mafonti mu Photoshop zvakananga, iine mamwe mafonti anowanikwa kuisa nekushandisa sechikamu chako cheAdobe Creative Cloud kunyorera.